विद्युत् प्राधिकरणको दाबी, एक वर्षभित्र सोलु कोरिडोर पूरा हुन्छ - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
विद्युत् प्राधिकरणको दाबी, एक वर्षभित्र सोलु कोरिडोर पूरा हुन्छ
फागुन ०१, २०७४ 2639 धना ढकाल/काठमाडौं
लामो समय विवादमा अल्झेर निर्माणमा गएको १३२ केभी सोलु कोरिडोर (प्रसारण लाइन) अबको करिब एक वर्षभित्र पूरा गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दाबी गरेको छ । धमाधम काम भइरहेकाले २०७५ चैतभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
मिर्चैया–सोलुुखुम्बु ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन ३ महिनामा १८ प्रतिशत पूरा भएको आयोजना प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतमले बताए । ‘अवरोध नभएका ठाउँमा २१ वटा फाउन्डेसन (टावर गाड्ने जग) तयार भएको छ,’ उनले मंगलबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘एक सातामा टावर ठड्याउन सुरु गरिनेछ ।’
उनका अनुसार अहिले धमाधम काम भइरहेको छ । कुनै प्रकारको अवरोध नभए निर्धारित समय र तालिका अनुसार पूरा गर्न सम्भव छ । लाइन निर्माण हुने जिल्लाको रुख कटान गर्न गत पुस १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।
सिराहा र उदयपुरमा टावर राख्ने र तार तान्ने स्थानका ८ हजार २ सय रुख काट्नुपर्ने छ । सरकारको स्वीकृतिपछि कटान हुने रुख चिनो लगाउन सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण लगानी रहेको प्रसारण लाइन भारतकाे मोहन इनर्जी कर्पोरेशनले निर्माण गरिरहेको छ । यो प्रसारण लाइन २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
सिराहा, उदयपुर, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुलाई प्रसारण लाइन आयोजनाले छुने हुँदा स्थानीय अवरोध धेरै हुने गरेको गौतमले बताए । रुख कटान, मुआब्जा वितरणलगायत विषयमा स्थानीयसँग सहमति नजुट्दा आयोजना अघि बढाउन समसया हुने गरेको उनले बताए ।
गौतमका अनुसार सिराहामा जग्गा अधिग्रहणको सकिएको छ । उदयपुर, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया क्रमशः अघि बढ्नेछ । मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सहज भए एक वर्षमा प्रसारण लाइन तयार हुन्छ ।
९० किलोमिटर दूरीमा ३ सय ३ वटा टावर निर्माण हुनेछन् । मिर्चैया र तिन्लामा एक एक सबस्टेसन राखिनेछ । मिर्चैयास्थित सबस्टेसनको निर्माण पूरा भएको छ भने तिन्लाको काम सुरु भएको छैन ।
सोलु कोरिडोरमा निर्माणाधीन आयोजना
यो प्रसारण लाइनमा निर्माणाधीन २ सय १५ मेगावाटका ५ जलविद्युत् आयोजना जोडिनेछन् । सोलु कोरिडोरमा अहिले ५.२ मेगावाटको जुनबेँसी, १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु, २३.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र ८६ मेगावाटको सोलु–दूधकोसी निर्माणामाधीन छन् । २.८ मेगावाटको सिसा खोला निर्माणमा जाने तयारीमा छ ।
निर्माणाधीन आयोजनामध्ये सोलु र तल्लो सोलु सरकारले प्रतिस्पर्धामा निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिएका (सुपर सिक्स) आयोजना हुन् । यी दुवै आयोजनाबाट अबको डेढ वर्षमा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । सोलु २०७५ असार र तल्लो सोलु २०७६ पुसमा पूरा हुने यसका प्रवर्द्धकले जानकारी दिएका छ।
प्राधिकरणले समयमै लाइन निर्माण गर्ने दाबी गरे पनि कामको सुस्तताले विद्युत् खेर जाने प्रवर्द्धकको चिन्ता छ । समयमा प्रसारण लाइन नबने प्राधिकरणले र आयोजना तयार नभए प्रवर्द्धकले ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।